"Ma Jiro Qof Ballon 'Or Ka Celin Kara Mohamed Salah Haddii Uu Egypt Ku Hoggaamiyo Koobka Qaramada Africa!!" - Messi & Van Dijk Oo Loo Digay. - Gool24.Net
“Ma Jiro Qof Ballon ‘Or Ka Celin Kara Mohamed Salah Haddii Uu Egypt Ku Hoggaamiyo Koobka Qaramada Africa!!” – Messi & Van Dijk Oo Loo Digay.
Shaki la’aan Mohamed Salah waa mid kamida xiddigaha ugu cad cad ee sanadkan u tartami doona abaalmarinta xiddiga sanadka ee Ballon d’Or walow uu tartan adag kala kulmi doono xiddigo kale oo qudhoodu wacdarro soo dhigay.
Mohamed ayaa xilli ciyaareed aad u sarreeya lasoo qaatay Liverpool isaga oo horyaalka u suurtogaliyay inay booska labaad ka galaan halka uu sidoo kale kusoo guuleeyay UEFA Champions League markoodii ugu horreysay 14 sano kaddib.
Dhinaca kale Salah ayaan soo ahayn xilli ciyaareedkan mid ka madhan abaalmarinaha shaqsiga ah waxaana uu markii labaad oo xidhiidh ah kusoo guuleystay abaalmarinta gool dhalinta horyaalka ee kabta dahabka ah.
Iyadoo ay sidaas tahay ayuu 27 jirkani yahay murashax xoogan oo ugu yaraan boos ku yeelan kara saddexda sarre ee u tartami doona Salah.
Fursadiisa uu ku qaadayo abaalmarintaas ayaa si buuxda u dhammaystirmi doonta haddii uu waliba xulkiisa Masar ku guuleeyo koobka qaramada Africa ee haatan soconaya sida uu qabo tababaraha qarankaas ee Javier Aguirre.
Aguirre ayaa yidhi isaga oo sharaxaad bixinaya “Anigu waxaan arkaa ilaa hada isaga oo ku dhibtoonaya oo ku dhibtoonaya inuu ku guuleysto Ballon d’Or, Maxaa diidaya? Isagu waa ku guuleyste Champions League oo Liverpool ayuu la qaaday”
“Haddii uu Egypt ku hoggaamin karo koobka qaramada Africa, Ma jiro qof isaga Ballon d’Or ka celin karaa” Ayuu hadalkiisa kusoo koobay tababare Aguirre.
Salah ayaa seegay tababarkii xulkiisa ee Khamiistii sababo hargab (Duray) dartood balse waxa la filayaa inuu qayb ka noqdo xiddigaha wajahaya South Africa oo ay wareega 16-ka ku balansan yihiin,
Hadalkan ayaa u muuqda mid farriin digniina u noqonaya xiddigaha Salah kula loolamaya abaalmarintaas oo ay ugu horreeyaan Van Dijk oo ay Liverpool kawada tirsan yihiin iyo Lionel Messi.